लिफ्टिङ्गले खानेपानी सहज - GBM
बेस नेपालद्वारा ६ सय घरधुरीलाई खाद्यान्न सहयोग
सहिद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिगमा आज पनि दुई खेल हुँदै
एमालेले महाधिवेशनमा २ सय ५० जनाभन्दा धेरै डाक्टर परिचालन गर्ने
लुम्बिनी सहकारीको २७ औं वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न
सिद्धार्थनगर सिटी हस्पिटलमा ‘नर्भल डेलिभरी तथा एल.एस.सी.एस. प्याकेज’
लिफ्टिङ्गले खानेपानी सहज
२०७५ पुष ८ gautam buddha sandesh	0 Comments
गुल्मी, ७ पुस ।
स्थानीयले कहिल्यै पानी आउला र घरमै बसीबसी पानी पिउन पाउँला भन्ने कल्पना समेत गरेका थिएनन् । नजिकै मुहानहरु पनि नभएकाले र अग्लो स्थानमा रहेकाले पानी ल्याउन समेत कठिन अवस्थामा रहेको गुल्मीको इस्मा गाउँपालिका वडानम्बर–१ स्थित उजुङ्गमा स्थानीयले कल्पना गरेभन्दा फरक भएको छ । सदियौंदेखि खानेपानीको लागि समस्यामा रहेका उजुङ्गमाबासीको पानीको समस्या समधान भएको छ । सोही वडाकै दुनदुरे खोलाबाट लिफ्टिङ्ग मार्फत पानी तानेर अग्लो स्थानमा पुगेपछि स्थानीएको पानीको समस्या समधान भएको हो ।
यसअघि यहाँका एक सय ४७ घर परिवारको पानी खोज्दैमा दैनिकी बित्ने गर्दथ्यो । दैनिक ३ देखि ४ गार्गी पानीको लागि टाढा पुगेर लाइन बसेर बोक्नु पर्दा यहाँका स्थानीयलाई दैनिकी चलाउन निकै कठिन थियो । नजिकै भएका मुहानहरु सुकेपछि टाढाटाढा पानीलिनजना उनीहरु बाध्य थिए । पानी अभावकै कारण यहाँबाट बसाई सर्ने क्रम पनि बढेको थियो । पानी बोक्नुुपर्ने कारण पनि यहाँ अन्यत्रबाट छोरी दिन समेत आनाकनी गर्ने गरेको स्थानीय बताउँथे । तर, यो सबै समस्याको समधान लिफ्टिङ्ग खानेपानीले गरिदिएको छ । ०७० सालबाट सुरु गरिएको दुनदुरे खोला उजुङ्ग हर्पुकोट खानेपानी ५ वर्ष पछि निर्माणको काम सम्पन्न भएको हो ।
नेपाल सरकारबाट ३ करोड ६९ लाखमा सम्पन्न खानेपानी आयोजनाले पानी तान्न सुरु गरेपछि स्थानीयले खुसी व्यक्त गरेको दुनदुरे खोला उजुङ्ग हर्पुकोट खानेपानी समितिका सचिव नारायण कुँवरले बताए । तत्कालको लागि अस्थायी रुपमा पानी बितरण भएको छ, उपभोक्ता समिति सचिव कुँवरले भने, ‘केही दिनमै घरघरमा लगेर बितरण कार्य सुरु गरिनेछ ।’ हाल २ सय २७ घरले खानेपानी पिउनका लागि सदस्य बनेको सचिव कुँवरले बताए । पानी पिउनका लागि प्रतिव्यक्ति ३ हजार ५५ रुपैयाँ लाग्ने समितिका अध्यक्ष बैकुण्ठ कुँवरले बताए । हालको लागि केही घरहरुले पानीको उपभोग गरिरहे तापनि एक घर एक धारा अनुसार मिटर सिस्टमले बितरण गरिने अध्यक्ष कुँवरले बताए । करिब ७ सय घरलाई पुग्ने लिफ्ट गरिएको खोनपानी ९ सय ५० मिटर तलबाट माथि ल्याइएको हो ।
खानेपानी उजुङ्ग, हर्पुकोट, हस्तीचौर, तोरिखर्क र फेदियसम्मका स्थानीयले माग गरेको समितिका सचिव कुँवरले बताए । कल्पना समेत नगरेको ठाउँमा पानी आउँदा निकै खुसी भएको स्थानिय अर्जुन कुँवरले बताए । पानी बोकेर स्कुल जाँदा बिद्यार्थीहरुलाई पनि निकै समस्या थियो सचिव कुँवरले भने, ‘स्थानीय निकै खुसी भएका छन् । अब उनीहरुको दैनिकीमा परिर्वतन आउनेछ ।’ पानी बोकेरै दैनिकी बिताउनु पर्ने स्थानीयले अब त्यो समयलाई अन्य आयआर्जन र अरु काममा लगाउने उनको भनाई छ ।
← दुम्सीको पासोमा चितुवा
लायन्स क्लब सेन्टिनियलको मुटु शिविर →
सी.पि.एन.सुनवलले सी.पि.एन.मिस्टर÷मिस एस.ई.ई. २०१८ गर्ने
२०७४ चैत्र २५ gautam buddha sandesh	0
‘बहुजातीय लोकतान्त्रिक समाजवादको विकल्प छैन’
२०७५ पुष १ gautam buddha sandesh	0
अवैध ‘क्यासिनो’ संचालन, प्रशासनले थाल्यो छानविन
२०७५ जेष्ठ २४ gautam buddha sandesh	0
२०७८ मंसिर ६ gautam buddha sandesh	0
मंसिर ६,काठमाण्डाै । सहिद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिग फुटबलमा आज पनि दुई खेल हुँदैछन् । दशरथ रङ्गशालामा हुने पहिलो खेलमा
२०७८ कार्तिक २६ gautam buddha sandesh	0
यूएईले पाँच वर्षे मल्टिपल इन्ट्री टुरिस्ट भिसा जारी गर्ने
२०७८ कार्तिक २४ gautam buddha sandesh	0
कात्तिक २४,काठमाण्डौ । यूएईले पाँच वर्षे पल्टिपल इन्ट्री टुरिस्ट भिसा जारी गर्ने भएको छ । कोरोना महामारीपछि आफ्नो देशमा पर्यटकको
काठमाण्डौं ।। आधुनिक गीतसंगीत जगतका चर्चित गायक प्रमोद खरेलको स्वरमा एकै चोटी मारन ओए बोलको गीत बजारमा आएको छ ।